गोविन्द केसीको १६ औ अनसनको पहिलो दिन (भिडियो) सहित - Deshko News Deshko News गोविन्द केसीको १६ औ अनसनको पहिलो दिन (भिडियो) सहित - Deshko News
गोविन्द केसीको १६ औ अनसनको पहिलो दिन (भिडियो) सहित
इलाम २५ पौष डा. गोविन्द केसीले इलामबाट १६ औ अनसन सुरु गरेका छन् । सरकारले सहमति विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेका भन्दै केसीले सुदुरपूर्वी जिल्ला इलामबाट अनसन सुरु गरेका हुन् ।
अस्पतालमा अनसन बस्दा विरामी हरुलाई प्रभाव पर्ने भन्दै यो पटक केसीले सडकविभागको एउटा पुरानो भवनमा अनसन प्रारम्भ गरेका हुन् । डा. गोविन्द केसीको अनसनलाइ साथ दिनको लागी दर्जनौको संख्यामा समर्थहरु समेत उपस्थित भएका छन् ।
केसी इलामको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको पुरानो कार्यालय फूलगाछीमा अनसन सुरु गरेका हुन् ।
केसीले ६ बुँदे माग राख्दै सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । उनले १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार अक्षरश संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गर्न माग गरेका छन् । भिडियोमा हेर्नुहोस डा. गोविन्द केसीको अनसनको पहिलो दिन